पाठकले पनि आफूलाई लेखक मान्ने रोग तीव्र गतिमा फैलँदो छ| The Margin Media
पाठकले पनि आफूलाई लेखक मान्ने रोग तीव्र गतिमा फैलँदो छ
विसं. २०२५ सालमा जन्मिएका उदय अधिकारी पुस्तकको लसपसमा रमाउने व्यक्ति हुन् । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अंग्रेजी प्राध्यापन गराउँदै आएका अधिकारी कविडाँडा साहित्य समाजका उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छ, अधिकारीसँगद मार्जिनको साप्तहिक स्तम्भ ‘किनाराका साक्षी’ का लागि राजु झल्लु प्रसादले गरेकाे कुराकानी:
‘तपाईंलाई पढ्ने मुड, लेख्ने मुड कति बेला आउँछ ? कस्तो आसनमा पढ्नुहुन्छ ? दिनको कति घन्टा पढ्नुहुन्छ ?’ यी रुटिङ प्रश्नहरू भए, आवश्यक भएनन् । तर यी कुराहरू चाहिँ सोध्छु- तपाईंको लागि पुस्तक के हो ? पुस्तकसँग तपाईंको साक्षत्कार कसरी हुन् पुग्यो ?
प्रायःजसो किताबहरूले नै मेरो मूड तयार गरिदिन्छन् । म सुत्ने ओछ्यानमा बसेर अडेस लगाएर पढ्ने गर्दछु । पढ्दै जाँदा कहिलेकाहीँ दशौँ घण्टा पनि पढिन्छ । मेरा लागि पुस्तक संवादको माध्यम हो । मेरो हजुरबा पण्डित हुनुहुन्थ्यो । मैले हुर्किँदै गर्दा देखेको किताब नै थियो । आमा लय हालेर पढ्नुहुन्थ्यो । मेरो लागि पढाईको पहिलो जम्काभेट स्वास्थनी, मुनामदन र दन्त्यकथा थियो ।
तपाईंले खोजेका किताबहरू कत्तिको भेटिएका छन् ? तपाईं कस्ता किताबहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ?
प्रविधिले गर्दा खोजिएका प्रायः सबैजसो किताबहरू भेटिन्छन् । अहिलेको समाज जटिल छ र यसै जटिलतालाई सरल तरिकाले बुझाउन सक्ने किताबहरुको खोजीमा हुन्छु । मेरो पुस्तक छान्ने आधार आफ्नो अध्ययन र अनुभव नै हो । त्यसभन्दा अगाडि गएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा आएको समीक्षा, युट्युब लगायत मिडियामा आएका लेखकहरूका अन्तर्वार्ताहरू हुन् ।
पुस्तक छनौटको आधार केलाई बनाउनुहुन्छ ? पढेकामध्ये सबैभन्दा मन परेका पुस्तकहरू ?
गुगलले धेरै सहज पारिदिएको छ यस कामलाई । आन्ना कारेनिमा, द इडियट, द म्याजिक माउण्टेन, वन हन्ड्रेड एअर्स अफ सोलिच्यूड, द गड् अफ स्मल थिङ्गस, माधवी, शिरिषको फूल लगायत मलाई धेरै किताबहरू मन पर्नेछन् ।
‘पुस्तक पढ्नेहरू ज्यादा सहानुभूति पाल्छन्’ अरे ! हो ? सँगै, ‘हाम्रो पठन रिङरोड ‘पैदलयात्रुमैत्री’ भएनन्’ भनिन्छ, हो र ?
पुस्तक पढ्नेहरू बढी संवेदनशील हुनु झन् राम्रो हो । हाम्रो पठनका यात्रा धेरै लामो छैन । जब पुस्तकहरू दूरदराजमा पुग्दछन्, यिनीहरुले इतिहास निर्माण गर्दछन् । पुस्तक सोकेशमा देखाउने वस्तु मात्र होइन । खुशीको कुरा पुस्तकहरू नेपालभरि नै यात्रामा छन् ।
जीवनी, आख्यान, गैरआख्यान, कविता ? तपाईंको रुचि बेसी कुन विधामा छ ? सभ्यता, साहित्य, इतिहास, दर्शन, भूगोल, संस्कृतिका के-कस्ता किताबहरू छन् तपाईंसँग ?
मलाई आख्यान र कविता अध्यधिक मनपर्दछन् । म गैरआख्यान मसँग भएको ज्ञानको दायरा बढाउन पढ्छु । मलाई अध्ययनको धेरै मनपर्ने क्षेत्र इतिहास, दर्शन र संस्कृति हो । अहिलेको प्रविधिको सहज पहुँचताले धेरै पुस्तक सुलभ भएका छन् ।
तपाईंसँग भएका दुर्लभ किताबहरू ?
मसँग कुनै बेला दुर्लभ मानिएका बोरिस पास्तरनाकको डक्टर जिवाको र सोल्जीनेत्सेयनको द क्यान्सर वार्ड भन्ने किताब छन् ।
परीक्षामुखी शिक्षा प्रणालीले गर्दा पाठ्यपुस्तकमा सीमित भएका विद्यार्थीहरूलाई कस्ता पुस्तकहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ ?
विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान फैलावटमा विश्वास गर्न सिकाउनुपर्दछ । यदि उनीहरू अंग्रेजीमा पढ्न चाहन्छन् भने पश्चिमी दर्शनमा आधारित सोफिज वल्र्ड पढ्दा राम्रो हुन्छ । यसपछि जे.डी. स्यालिङरको क्याचर इन द राइ पढ्दा हुन्छ । सरल भाषामा एउटा गहन किताब पढ्न चाहन्छन् भने विक्रम सेठको अ सुइटेबन ब्वाय सिफारिस गर्दा हुन्छ । यी ढोकाहरूबाट पसेपछि उनीहरू अंग्रेजीको साम्राज्यमा पुग्नेछन् । नेपालीमा भूपी शेरचनको घुम्न मेचमाथि अन्धो मान्छेबाट सरल यात्रा शुरू गर्न सकिन्छ । धच गोतामेको घामका पाइलाहरु भन्ने उपन्यास र रमेश विकलको नयाँ सडकको गीत भन्ने कथा संग्रहले अगाडीको यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् ।
सत्तामुखी नेता/कार्यकर्ता/प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ ? क-कसलाई कुन-कुन किताब सजेस्ट गर्नुहुन्छ ?
पढ्ने सुझाव सधैँ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने छैन । यदि राजनीतिमा आउनको लागि कसैले कम्मर कसेको छ भने विपीको आत्मवृतान्त, मण्डेलाको अ लङ वाक टू फ्रिडम, नेहरुको एन अटोबायोग्राफी पढ्दा अगाडिको बाटो सहन हुने पक्का छ ।
प्राध्यापकहरूको बारेमा आफ्ने रुचिमा भर पर्दछ । म साहित्यको विद्यार्थी भए पनि भर्खरै अर्मात्य सेनको मेमोइर अ होम इन द वल्र्ड पढेर बडा आनन्द लिएँ । साहित्यका प्राध्यापकहरूलाई सलमान रुस्दीको जोसेफ आन्टोनले आनन्द देला भन्ने लाग्छ ।
हाम्रो शैक्षिक संस्कारको मोडेलबारे तपाईंलाई बोल्ने मुड छ ? नेपाली छापाहरू, नेपाली लेखकहरू, नेपाली पाठकहरू के छाप्दै, लेख्दै र पढ्दै छन् आजभोलि ? साथै, उनीहरूको अन्तरसम्बन्ध कस्तो पाउनुपर्छ ? कस्तो हुनु पर्ने थियो ?
हामीकहाँ कोर्स बाहिरका किताबहरू पढ्ने बानी विकास गर्न आवश्यक छ । आजभोलि लेखिने र छापिने क्रम बढेको छ । त्यसै कारणले केही भए पनि राम्रा चीजहरू बाहिर आइरहेका छन् ।
पढ्ने मामलामा हामी कता छौं ?
पढ्ने मामलामा हामी लगभग कुण्ठित अवस्थामा छौँ । आफ्नो समूहबाहेक अरूको नपढ्ने, पढे पनि चर्चा गर्न मन नपराउने र समूहको घेरा नाघ्न मन नपराउने लेखकहरूबाट उत्तराधिकारमा पाएको रोग पाठकहरूमा पनि सल्की सकेको छ । प्रविधि र भेटघाटको सहज सुविधाले पाठकले पनि आफूलाई लेखक मान्ने रोग तीव्र गतिमा फैलँदो छ ।
सर्जकले आफ्नो सृजनशक्तिले नयाँ पाठक उत्पादन गर्ने हो । यो प्राकृतिक नियम हो । तर यहाँ कहिलेकाही यस्तो पनि देखिन्छ कि पाठकहरु आफ्नो रुची अनुसारको लेखक उत्पादन गरिरहेका छन् । रुचि परिष्कृत हुँदै जाने हो, स्खलित हुने होइन । यसो हुनको लागि लेखक लेखक मात्र भएर पुग्दैन, एउटा विशिष्ट पाठक पनि बन्नु पर्छ । अहिले “कथाले माग्यो” भन्ने डाइलग खुब लागू भएको छ । तर यसलाई ‘समयले कथा माग्यो’ भन्ने डायलगमा बदल्न जरुरी छ ।
पछिल्ला किताबहरूलाई केवल ‘लेखकको एकांगी अनुभूतिमा सिमित भएको’ आरोप लागिरहेको छ ! तपाईंको मत ?
हो, सबैलाई हतार छ । भुइँको टिप्छु भन्दा पोल्टाको खस्ने खतरा छ । पारम्परिक ज्ञानको सीमालाई भत्काउन आवश्यक छ । तर लेखक हतारमा छ । जे आफ्ना आँखा अगाडि छ, त्यही टिपिरहेको छ । यो त भयो बहुमतको कुरा, तर केही लेखकहरू यस्ता पनि छन् जो जसँग धैर्यता छ, आफ्नो ज्ञानको सीमितता बुझ्दछन् । आफ्नो सीमित ज्ञानलाई बृहत ज्ञानको परम्परासँग जोड्न चाहन्छन् । मैले अलि अगाडि परेको योगेश राजको रणहार र भुवन ढुंगानाको परित्यक्ता उपन्यासले मेरो अड्कललाई बल दिएको छ ।
‘लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ’ या ‘पढ्नेले लेख्छन्’ भन्ने गरिन्छ । अझ, ‘लेखन भनेको अध्ययनको सहउत्पादन हो’ भन्ने भाष्य छ । तपाईंको मत ?
लेख्नको लागि पढ्नुपर्छ भन्ने चर्को स्वरमा कराउने व्यापारिक तर्क हो । पढ्नु र लेख्नु विशेषगरी साहित्य व्यक्तिगत रुचिको विषय हो । थुप्रै व्यक्तिगत रुचिहरू मिसिएर सामूहिक रुचि बन्दछ । रुस्दीको द मिडनाइट चिल्ड्रेनले थुप्रै भारतीय पाठकहरू किन पाइरहेको छ भने त्यहाँ उनीहरुको कथा छ । हामी यो किन किताब पढिरहेको छौँ भने यो दक्षिण एसियाको कथा पनि हो । राइन्टन मिस्त्रीको अ फाइन ब्यालेन्स हामीकहाँ कपडा सिलाउनेको कथा पनि हो र कथा हो- सिलाएको कपडा लगाउनेहरूको ।
तपाईं किन लेख्नुहुन्छ ? तपाईं किन पढ्नुहुन्छ ?
म पढ्छु, किनकि मैले देखेको संसार पुस्तकहरू मार्फत प्रमाणित गर्न चाहन्छु । सायद लेखकहरू आफ्ना रचना मार्फत हामीलाई उनीहरुले देखेको संसार देखाउन चाहन्छन् । झल्लुजी, सायद तपाईंले जित थायलीको एकदम क्रेजी लाग्ने नार्कोपोलिस पढ्नु भएको होला । सायद उनलाई उनले भोगेका कुरा भन्न मन लाग्यो होला । नाभाकोभले लोलिता किन लेखे ? सायद उनको मनले नलेखी सुख दिएन होला ।
तपाईं पढिरहने मान्छे ! कहिलेकाहीँ ‘कागजको नोक्सान गरे यार’ भन्ने पनि लाग्दो हो ! कुनै किताब ‘चिनी नपुगेको सर्बत’ जस्तो किन बन्दो रहेछ ? लेखकहरूले मन दुखाए दुखाउन्, केही यस्ता किताबका नाम लिनुहोस् न !
तास उत्पादन गर्नुभन्दा किताब उत्पादन गर्नु राम्रो हो । अहिले समाज बजारमा परिणत भएको छ र लेखक पनि बजारलाई आवश्यक पर्ने चीज उत्पादन गर्न लागेका छन् । मलाई जान्न मन लाग्ने कुरा के हो भने के त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो र जसले अमर र कुमारलाई बजारको मुटुमा गुलाफी उमेर र कल्पग्रन्थ पछार्न बाध्य बनायो ।
तपाईंले पढिरहने/सुनिरहने/हेरिरहने नेपाली/विदेशी स्तम्भ/पोडकास्ट/डकुड्रामाहरू ? यसमा फिल्म, संगीत र चित्रकला पनि जोडौँ है !
म पेरिस रिभ्यूको लामो अन्तर्वार्ता र रचनाहरु पढिरहन्छु । ग्रान्टामा छापिएका रचनाहरूले मलाई अझ बढी पढ्न प्रोत्साहन दिइरहन्छ । आधुनिक लेखकहरूका रचनाको लागि म न्यूयोर्करका पेजहरू चारिरहन्छु । म हिन्दी अलि बढी हेर्दछु । मलाई मन परेमा मध्ये द रेनकोट र इजाजत पनि हुन् । स्टेफन हकिङस माथि बने द थ्योरी अफ एभरीथिङ र टम ह्याम्क्सको द टर्मिनल मन परेका फिल्महरू हुन् । पेण्टिङमा मलाई पिकासोको टच अत्यधिक प्रिय लाग्छ ।
समकालीन नेपाली साहित्यले लेख्न छुटाइरहेको विषयवस्तुहरू के-के हुन् ? लेखिएकाहरूमा देखिएका समस्याहरू ? लैङ्गिकताको सवालमा, स्वतन्त्रता र समानताको सवालमा एवम् नारी/अपाङ्ग/प्रौढ/सीमान्तकृत समुदायको सवालमा हाम्रा लेखकहरू कता छन् ?
अहिले नेपाली साहित्य बहुल विचारहरूको सुन्दर घोडा चढेर अगाडी बढिरहेको छ । सायद यतिको हार्दिकता इतिहासमा कतै पनि पाइएको थिएन । फरकफरक विचारहरू, फरकफरक भँगालाहरू एउटै मूलधारमा समाहित भएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन् । अहिलेसम्म एउटाको कथा अर्काले भनिरहेको थियो, अब सबै आ–आफ्ना कथा लिएर बाचनको तयारीमा छन् । श्रवण, राजन, हाङयुङ, मोक्तान, थेवा, बिना थिङ्गले जनजातिका कथा; अर्चना, सरिता, सुमिनाहरूले नारी दलनको कथा; आहुती, कृष्ण विश्वकर्माहरूले दलितका कथा; राजेन्द्र विमल, श्याम साहहरूले तराईका कथाहरु राम्रोसँग भनीदिएनन् भने हामीले धेरै कुराहरु गुमाउनेवाला छौँ । जनयुद्धमाथि एकदम कम लेखिएको छ । यसको लागि जनयुद्ध भोगेर आएको लेखकलाई समयले खोजीरहेको छ । यसै सन्दर्भमा जनयुद्धलाई नजिकबाट देखेका सृजन अविरलले भर्खरै आएको उनको उपन्यास मोक्षमा राम्रेसँग अभिव्यक्त गरेका छन् । पहाड र हिमालको कथाको अभाव छ । कञ्चनजंघादेखि कालापत्थरसम्मको कथा आउन बाँकी छ ।
‘लेखक बजारमा त पुग्यो तर लेखकभन्दा बजार बलियो हुन् पुग्यो ।’ के म सही छु ? लेखक आफ्नो अस्मिता/नैतिकतामा बाँच्न नसकेको कि बजार तानाशाही हुँदै गएको ?
बजार बिक्री हुने ठाँउ हो । यसले प्रत्येक चीजको मूल्य तोक्दछ । किताबहरू बिक्री हुन थाले राम्रो कुरा हो । लेखकले के बेच्ने, के राख्ने भन्ने कुरा स्वयम्मा भर पर्ने कुरा हो । राम्रो लेखकले बजार बढाउदछ पनि । बजारमा एकाधिकार जसले पनि खोज्दछ । लेखकले लेखनमार्फत एकाधिकारको दावी गर्नुपर्दछ ।
तपाईंको ‘काव्यिक अभ्यास’बारे पनि जान्न मन भयो। आजभोलि के लेख्दै हुनुहुन्छ?
म एउटा अभ्यासरत पाठक हो । कहिलेकाहीँ केही झिल्काहरू आउँदा अंग्रेजीमा लेख्ने गर्दछु । र, अहिलको सबैभन्दा लोकप्रिय इ-पत्रिका फेसबुक वालमा पोष्ट गर्दछु ।
मैले त सक्काएँ, तपाईंको केही प्रश्नहरू छन् कि ?
तपाईका प्रश्नहरु गज्जब छन् । यदि तपाईंले पढिरहनुभयो भने कुनै दिन तपाईंलाई यस्तै प्रश्नहरू सोधेर अत्याउन मन छ ।
म 'अन्तरमुखी' उपन्यासकी पात्र जस्तै छु, जो हल्लाखल्लाहरूमा चासो राख्दिन
'डे' इन हिस्ट्रीः ‘डायरी अफ अ याेङ गर्ल’ लेख्ने एन फ्य्राङ्क पक्राउ
‘डे’ इन हिस्ट्रीः जर्मन-फ्रान्स युद्ध
‘डे’ इन हिस्ट्रीः जापानको आत्मसमर्पणसँगै सकियो विश्वयुद्ध
‘डे’ इन हिस्ट्रीः आजकै दिन शुरू भयो द्वितीय विश्वयुद्ध
‘डे’ इन हिस्ट्रीः जब मजदुरहरूसँग झुक्यो कम्युनिस्ट सरकार
‘डे’ इन हिस्ट्रीः जब लेलिनलाई गोली हानियो
‘डे’ इन हिस्ट्रीः हिटलरद्वारा एकैदिन २३ हजार यहुदीकाे हत्या
‘डे’ इन हिस्ट्रीः इतिहासको सबैभन्दा भयानक ज्वालामुखी विस्फोट